လူတွေဟာ အချက်အလက်တွေထက် မိမိရဲ့ bias ကိုပိုပြီး အားသာကြပါတယ် – Curiosity
လူတွေဟာ အချက်အလက်တွေထက် မိမိရဲ့ bias ကိုပိုပြီး အားသာကြပါတယ်
Home /လူတွေဟာ အချက်အလက်တွေထက် မိမိရဲ့ bias ကိုပိုပြီး အားသာကြပါတယ်
Life Science,Science News |
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိထားတာက လူဆိုတာ အမှန်အမှားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး အချက်အလက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချလေ့ရှိတဲ့ မျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ် အားလုံးမှတ်ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလဲ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဖြစ်တာကြောင့် bias ဖြစ်ပြီး လူသားတွေအပေါ်မှာ ဘက်လိုက် အမှန်ထင်တတ်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုနောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သုတေသနတစ်ခုအရတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bias တွေဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ ထင်ထားတာထက် ကြီးနေပါတယ်။
École Normale Supérieure က ဒေါက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ စတက်ဖီနို ပယ်မင်တယ်ရီဦးဆောင်တဲ့ သုတေသီအဖွဲ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရတော့ လူတွေဟာ bias အများအပြားရှိနေကြပါတယ်။ လူတွေဟာ အလွယ်တကူယုံရတဲ့ facebook ပေါ်က စာများတင်သာမက ကျွန်တော်တို့ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးမှု ရှိနိုင်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာပါ bias တွေထားတတ်ကြတယ်လို့ စာတမ်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ဟာ လူ အယောက်နှစ်ဆယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ကို စမ်းသပ်မှု နှစ်မျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ကေတများရွေးရတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုစီကိုလဲ ပေးထားပါတယ်။
ပထမအကြိမ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သင်္ကေတများရဲ့ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့ သင်္ကေတတွေကို ရွေးချယ်ရင်း အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ချို့သော သင်္ကေတတွေဟာ တစ်ချို့သော သင်္ကေတတွေထက် တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိလာကြပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်ထက်ပြီး အဲ့ဒီ စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့ဟာ အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေ အားလုံးရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိပေမယ့်လဲ သူတို့ ပထမစမ်းသပ်မှုတုန်းက ပထမဆုံးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ သင်္ကေတတွေကိုသာ အရွေးများပါတယ်။
ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ အချို့လူတွေဟာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲသိပေမယ့် သူတို့ စိတ်ထဲမှာ အစောကတည်းက မျက်နှာသာပေးထားတဲ့ စိတ်ကို မပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ လေ့ကျင့်ရင် အဲ့ဒီ bias ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သေးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဒေါက်တာပယ်မင်တယ်ရီ က New Scientist မဂ္ဂဇင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ၂၀၁၂ တုန်းကတစ်ခါ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတစ်ခါ သုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ အဖြေဟာ bias ကြီးမားတယ်ဆိုပြီပဲ ထွက်ပါတယ်။
ဒီစာတမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး မူရင်းအဖြစ်နဲ့ PLOS Computational Biology မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Blogger at Curiosity
Hey, I’m Thar Htet, founder of Curiosity. I’mablogger and technical expert(Engineering and Information & Technology) living in Yangon Region, Myanmar (Burma) holding the Bachelor Degree of Engineering. I amafan of technology, entrepreneurship, and politics. I’m also interested in astronomy and education.
လေယာဉ်တွေ ဘယ်လိုပျံသန်းကြသလဲ - November 18, 2017
အသိပညာတိုးတက်မှုအား ခြိမ်းခြောက်နေသော လူမှုကွန်ယက်များ - October 24, 2017
Scientific Literacy ဆုပေးပွဲအခန်းအနားမှ Curiosity အဖွဲ့အစား သာထက်အောင်၏ ကျေးဇူးတင်စကား - October 21, 2017
Game of Thrones ၏ နောက်ထပ် အပိုင်း ၅ ခုအား AI တစ်ခုမှ ဖွင့်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်
စကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်မနေသိထားသင့်သော အချက် ၁၀ ချက်
TAGS: Articles Biology intelligence latest Life Science Science News tharhtetaung